Compass: Baro Dabeecadaha Soconaya Haysashada Macaamiisha | Martech Zone
Compass: Soo ogow Habdhaqanka Wada Wadaha Macaamiisha
Talaado, Maarso 8, 2016 Talaado, Maarso 8, 2016 Douglas Karr
Sida laga soo xigtay a waxbarasho laga bilaabo Econsultancy iyo Oracle Marketing Cloud, 40% shirkadaha ayaa diiradda saaraya helitaanka marka loo eego haynta. Qiyaasta jirta ayaa ah inay ku kacayso shan jibaar sidii ay u soo jiidan lahayd macmiil cusub halkii ay ku haysan lahayd mid hada jirta.
Xitaa ka sii muhiimsan, sidaan u arko, maahan kharashka helitaanka ama sii-haynta macaamil, waa dakhliga iyo faa'iidada loo kordhiyo nolosha macmiilka oo runtii ka caawisa waxqabadka shirkadda. Tanina wali ma tixgelinayso saameynta macaamilka faraxsan ee hadda jira iyo soo jiidashada macaamiisha cusub. Si fudud haddii loo dhigo, haynta ayaa u xoog badan sida xiisaha isku dhafan ay ugu jirto koontadaada hawlgabka.
Compass by Amplitude wuxuu u oggolaanayaa horumariyeyaasha barxadda inay ilaaliyaan dhaqanka isticmaalaha ka dibna muujiyaan saameynta dabeecadahaas ay ku leeyihiin guud ahaan sii-hayntaada. Haddii aad tan garatid, waxaad markaa ka shaqeyn kartaa dib-u-injineer iyo u-hagaajisaa meheradahaaga si aad u dhiirrigeliso haynta.
Baadhitaanada loo yaqaan 'Compass' ayaa lagu marinayaa macluumaadkaaga isticmaale oo lagu ogaanayaa dabeecadaha sida ugu fiican u saadaalinaya haynta. Fahamka dabeecadahaani waa furaha hagaajinta wax soo saarkaaga iyo wadista koritaanka waara.
Shirkaddu waxay leedahay daraasad kiis QuizUp, mid ka mid ah codsiyada moobiil ee bulsheed ee ugu waawayn suuqa. Markii ay falanqeeyeen akhlaaqda macaamiisha, waxay awoodeen inay horumariyaan sii-haynta adeegsigooda.
Waa kuwan horudhaca ah Compass.
Tags: Ilodanimadaxajmiga compasswareegtaanhaynta macaamiishafalanqaynta haynta macaamiishafalanqaynta haynta
5 Dariiqo oo loogu talagalay Xirfadleyda Xiriirka Dadweynaha inay ku hagaajiyaan godadkooda
Waa Maxay Qiimaha Lagu Hesho Macaamiisha Macaamilku?